Amandla Omuntu Ongaphakathi | Martech Zone
Amandla Omuntu Ongaphakathi
ULwesithathu, April 25, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Eminyakeni embalwa eyedlule, empeleni saba nomhlangano nebhodi elithile eCisco nge I-Telepresence futhi kwakungeyona into emangazayo. Ukukhuluma nomuntu ngosayizi ogcwele nobuso nobuso kunenani elingakholeki. Abantu baseCisco bayavuma futhi bakubekile lokhu infographic emandleni emihlangano yabantu.
Izidingo zemakethe esatshalalisiwe yomhlaba wonke zishintshe indlela izinhlangano ezixhumana ngayo nozakwabo, abahlinzeki / abalingani, namakhasimende angahlukaniswa amabanga amade. Ucwaningo lomhlaba wonke olwenziwe yi-The Economist Intelligence Unit, olwaluxhaswe yiCisco, lwahlola imizwa yabaholi bamabhizinisi abangama-862 mayelana inani lemihlangano yabantu kanye nomthelela wabo kuzinqubo zebhizinisi ezingaphezu kwama-30. Ngakho-ke, yisiphi isinqumo? Ingabe ukuxhumana nabantu ngaphakathi kunamandla ngendlela esicabanga ngayo?
I-infographic imele imiphumela evela ku- ucwaningo lomhlaba wonke olwenziwe yi-The Economist Intelligence Unit, exhaswe yiCisco, eyahlola imizwa yabaholi bamabhizinisi abangama-862 ngokubaluleka kwemihlangano yabantu kanye nomthelela wabo ezinqubweni zebhizinisi ezingaphezu kwezingama-30.
Tags: CiscoukukhulumisanamathuphaAmavidiyo WokumakethaUbuchwepheshetelepresence
I-Emailvision nePinterest: Phina umncintiswano wakho webhokisi lokungenayo
I-Issuu: Ithuluzi Lokumaketha, Hhayi Amamagazini Nje
Ngo-Apr 25, i-2012 ku-8: i-14 PM
Iphuzu elihle uDoug! Lesi yisizathu sokuthi angisoze ngenqaba amakhukhi we-scout wentombazane:).
Lo mbono uphinde uhambisane nezinsika ezine zikaGuy Kawasaki zokuthakatha. Kumuntu unamandla, kepha udinga ukuthandwa, uthembeke, uhluke, njll.